Madaxda Dowlad Goboleedyadda oo looga digay in ay Muqdisho ka baxaan! - Muqdisho Online. Caasimada Muqdisho
HomeWararkaMadaxda Dowlad Goboleedyadda oo looga digay in ay Muqdisho ka baxaan!
Madaxda Dowlad Goboleedyadda oo looga digay in ay Muqdisho ka baxaan!
Sida ay noo xaqiijiyeen ilo ku dhaw beesha caalamka, Wakiilada Beesha Caalamka ee C6+ iyo Madaxweynayaasha Dowlad Goboleedyada Galmudug, Hirshabelle iyo Koofur Galbeed ayaa xalay kulan gaar ah ku yeeshay xarunta UN-ka ee Xalane. Kulankaan oo ku soo aaday saacado kaddib markii uu DFS sheegtay in shirkii fashilmay ayaa warar hoose oo aan helnay ay sheegayaan in Madaxda Dowlad Goboleedyada Galmudug, Hirshabelle iyo Koofur Galbeed ay eedda saareen Jubbaland iyo Puntland.
Wararku ayaa waxaa ay intaa ku darayaan in ay codsadeen in la fasaxo oo dib deegaanadoda ugu laabtaan, balse xubnaha Beesha Calamka ayaa diideen dalabkooda ahaa in la fasaxo, waxaana lagu wargeliyay cidii shirka ka baxda loo aqoonsan doono qaswade. Dhanka kale wakiilada beesha caalamka ayaa la filayaa inay maanta arkaan Madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland, ayna kala hadlaan arrimaha taagan ee la xariira fashilkii ku yimid hsirkii Afisyooni.